ကျန်းမာရေးဆောင်းပါးများ | Vibhavadi Hospital Myanmar
သားသမီးရတနာဆိုတာ မိသားစုအတိုင်းအတွက် အဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ ဆုလာဒ်တစ်ခုပါ။ တချို့တွေမှာတော့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သားသမီးရတနာလေးတွေ ရဖို့အတွက်ကြန့်ကြာနေတေတ်ပါတယ်။ သားသမီးရတနာလေးတွေ ရယူဖို့ အခြေအနေက ဘယ်လိုပဲ နှောင့်နှေးပြီး ခက်ခဲနေပါစေ နောက်ဆုံးမှာတော့ အောင်မြင်မှုကို ရခဲ့ပါပြီ။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် သားသမီး ရနိုင်ရန် ကြန့်ကြာနေပါက ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ရှိ ၀ိဖ၀တီဆေးရုံမှ Dr. Anchulee နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါသည် အချိန်မရွေးဖြစ်ပွားနိုင်သဖြင့် နှလုံးကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်းကို ပုံမှန်ပြုလုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အခိုက်အတန့်မူးမေ့လဲခြင်း၊ မကြာခဏသတိလစ်ခြင်း၊ ခြေလက်ဖောယောင်ခြင်းကဲ့သို့ နှလုံးရောဂါနှင့် ပတ်သက်သော လက္ခဏာများကို ခံစားနေရပါက အမြန်ဆုံးကုသမှုခံယူရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ပြင်မိမိ၏ မိသားစုဝင်များအတွင်း နှလုံးရောဂါခံစားနေရသူများရှိခြင်း (သို့) မိမိတွင်ဆီးချိုရောဂါ၊ သွေးတွင်းအဆီမြင့်တက်ခြင်း စသည့်ရောဂါများရှိပါက စောစီးစွာစစ်ဆေး ကုသမှုခံယူသင့်သည်။
‌ဆေး ၃ လ သောက်၇ုံဖြင့် အသည်းေ၇ာင်အသားဝါ စီ ပိုးကို ပျောက်ကင်းအောင်ကုသနိုင်ပါပီ
ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ ရှိ ၀ိဖ၀တီဆေးရုံကြီးတငွ် အသည်းရောင်အသားဝါ စီပိုးကုသမှုအတွက် ” MyHep All ” နာမည်ဖြင့် နောက်ဆုံးပေါ် ဆေးဝါး ရရှိနေပါပြီ။ သောက်ဆေးပြား ဖြစ်ပြီး မည်သည့် စီပိုးအမျိုးအစားဖြစ်ပါစေ အဆိုဆေးဖြင့် ကုသလို့ ရပါသည်။ တစ်နေ့ လျှင် တစ်လုံးသာ သောက်သုံးရပီး ၃ လ သောက်ရပါမည် အသေးစိပ်ကြည့်ရှုရန်
ဝိဖဝတီဆေးရုံတွင်းရှိ အသစ်ဖွင့်လှစ်လိုက်သောVi Plaza တွင်ရရှိနိုင်သော စားသောက်ဆိုင်များ
သုံးထပ်ရှိ အစားအစာအမျိုးစားစုံလင်စွာ ရရှိသော Food Court MK restaurant, Pepper Lunch restaurant , Thai Terrace reastaurant , Hongkong Dimsum, S&P စားသောက်ဆိုင်များ Starbuck cafe , Cafe Amazon , Black Canyon cafe and bakery, Poss Ble Cafe, Mezzo coffee shop, Au Bon pain coffee shop ကော်ဖီဆိုင်များ
အမျိုးသားများအတွက် ဆီးကျိတ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာ …
အမျိုးသားအများစုတွင် အသက်အရွယ် ကြီးရင့်လာခြင်းနှင့်အတူ ဆီးကျိတ်ဆိုင်ရာ ပြဿနာ များကြုံတွေ့ရလေ့ရှိပါတယ်။ များသောအားဖြင့် ဆီးကျိတ်အရွယ်အစား ပုံမှန်ထက်ပို၍ကြီးထွားခြင်း (BPH-Benign Prostatic Hyperplasia) ၊ ဆီးကျိတ်ကင်ဆာ (CA Prostate) ဖြစ်ခြင်းတို့ကြောင့် ဆီးလမ်းကြောင်း ပိတ်ဆို့ကာ ဆီးသွားရ ခက်ခဲခြင်း၊ မကြာခဏဆီးသွားခြင်း၊ ဆီးမထိန်းနိုင်ခြင်း၊ ဆီးထဲတွင်သွေးပါခြင်း စတဲ့လက္ခဏာများ ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။
ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တနေ့တာဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်တွေကို ထိန်းချုပ်ပေးနေတဲ့ သိုင်းရွိုက် (Thyroid) ဂလင်း အကြောင်း ဆွေးနွေးကြည့်ရအောင်…
-	လူသားတို့ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာသက်ဝင်လှုပ်ရှားရင်း တစ်နေ့တာလုပ်ငန်းဆောင်တာ အားလုံးနီးပါးကို ဟန်ချက်ညီစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ အဓိကထိန်းချုပ်ပေးနေတာကတော့ လည်ပင်းရှေ့ အောက်နားတွင် ရှိသော ၂ လက်မ အရွယ်နီးပါး လိပ်ပြာပုံသဏ္ဍာန် သိုင်းရွိုက်ဂလင်းမှ ထုတ်လွှတ်သော ဟော်မုန်း များဖြစ်တဲ့ Triiodothyronine (T3) နှင့် Thyroxine (T4) တို့တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
စားသောက်မှုပုံစံ နှင့် ကိုလက်စထရော
သွေးတွင်းကိုလက်စထရော ကျဆင်းရန် စားသောက်မှုပုံစံ ပြောင်းဖို့လိုလား??
LASIK သို့မဟုတ် လေဆာဖြင့် မျက်လုံးပါဝါဖျောက်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ ???
လေဆာဖြင့် မျက်စိပါဝါဖျောက်ခြင်း (LASIK @ Laser Assisted in situ Keratomileusis) ဆိုသည်မှာ အရာဝတ္ထုများကို ကြည်ကြည်လင်လင် မြင်တွေ့နိုင်စေရန် မျက်လုံးအတွင်းရှိမှန်ဘီလူးကို လေဆာဖြင့် ပြန်လည်ချိန်ညှိပုံသွင်းခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ယင်းခွဲစိတ်မှုတွင် ကိုယ်ခန္ဓာတွင်း ထိုးဖောက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ မရှိသည့်အတွက် မြန်ဆန်သက်သာပျောက်ကင်းသော ခွဲစိတ်မှုဖြစ်သည့်အပြင် တိကျသေချာကာ ရေရှည် ကောင်းကျိုးရလဒ်များကိုလည်း ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
digital blood pressure monitor (ဓာတ်ခဲသုံး သွေးပေါင်ချိန်စက်)နှင့် သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းခြင်း
သွေးပေါင်ချိန် အဖြေမှန်ကန်ဖို့ သွေးပေါင်ချိန် တိုင်းလျှင် ဘယ်အချက်တွေကို လိုက်နာရမလဲ
COVID-19: Coronavirus နှင့် ပတ်သက်သော အယူအဆမှားများ
နှာခေါင်းစည်းက COVID-19 ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်တယ် လက်ဆေးခြင်းသည် ရောဂါကူးစက်ခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် မထိရောက်ပါ